‘सङ्ग्रहालय’ बन्दै छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जन्मघर’ ! – Khabarhouse
‘सङ्ग्रहालय’ बन्दै छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जन्मघर’ !
Khabar house | १२ माघ २०७६, आईतवार १५:२५ | Comments
काठमाडौं : यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मघर हो । जुन तेह्रथुम जिल्लाको साविक इवा गाविस–२ स्थित तीनसल्ले खानीगाउँ हाल आठराई गाउँपालिका-४ मा पर्दछ। त्यही घरमा ६७ वर्षअघि ओलीको जन्म भएको होे। उनको बाल्य काल र किशोरावस्था यहीँ बित्यो। पछि सपरिवार बसाइँ सरेर झापा गए। त्यहीँबाट राजनीतिको कखरा सिक्दै उनी मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका छन्।
यद्यपि, ओलीमा जन्मघरप्रति अगाध माया रहेछ । उनले गएको दशैंअगाडि ‘जन्मघर’ छाउन लगाए । चुना लगाउन लगाएर चिटिक्क बनाए । उनले लिपपोत पनि गराएका छन्। ओलीका बढीबाका छोरा रामप्रसाद ओली र स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई जन्मघर सिँगार्न ओलीले पठाएका थिए। घरदेखि अलि तल्तिर ओलीकै जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। १५ जना नेपाली सेनाका जवानले तीन दिनमा हेलिप्याड बनाएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री ज्यूकै निजी लगानीमा निर्माण गरिएको हो, उहाँले झन्डै सात लाख लगानी गर्नु भो’ स्थानीय भीम घिमिरेले भने। ओलीको ‘जन्मघर’ जाने सडकको पनि स्तरोन्नति गरिने भएको छ। उक्त सडकले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको ताप्लेजुङस्थित गाउँ ढुङ्गेसाँघु छुन्छ। ‘जन्मघर’लाई सङ्ग्रहालय बनाउनका लागि ‘केपी ओली ट्रस्ट नेपाल’ पनि गठन गरिएको छ।
ट्रस्ट मातहतमा जन्मघरसहितको साढे २५रोपनी जग्गा, ट्रस्टले खरिद गरेको करिब ७२ रोपनी जग्गा र एमोन कम्पनीले उपलब्ध गराएको झन्डै ७० रोपनी जग्गा छ।४ सय रोपनी जग्गा ट्रस्टका लागि आवश्यक ठानिएको घिमिरेले बताए। उनका अनुसार ट्रस्टले बाँकी जग्गा खरिद गर्नेछ । यसरी ट्रस्टको मातहतमा ओलीको जन्मघरसहित ४ सय रोपनी जग्गा भएपछि पशु विज्ञान, कृषि अनुसन्धान केन्द्रलगायत स्थापना गरिने योजना छ।
बढिबाका छोरा कृष्णप्रसाद ओली यो घरमा बस्दै आएका छन् । पुुस २४ गते भौतिक योजना मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङ घरको अवलोकन गर्न पुगेका थिए । ओली जन्मिएको घर कति सालमा बनेको भन्ने यकिन छैन । घरमा कोठा छैनन् । केही दशक अघिसम्म पहाडी क्षेत्रमा कोठा नभएका यस्ता खालका घर बनाउने चलन थियो ।अझै पनि कतैकतै यस्ता घर बनाइन्छ। तर, एकदमै न्युन मात्रामा।
यो घर ओलीका हजुरबुबा मनोरथ र हजुरआमा राममायाले बनाएका हुन्। यसलाई जोगाएर राख्ने ओली परिवारले चाहना छ। ‘हजुरबा र हजुरआमाले बनाएको जो हाम्रो पुख्र्यौली घर हो। जहाँ हामी हुक्र्यौं बढ्यौं’ ओलीका बडीबाका छोरा रामप्रसादले भने, ‘त्यही घरमा जन्मेर दाजु मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। र, उक्त घरलाई हामीले अस्तित्व ठानेका छौं र, यसलाई बचाउन संग्रहालय बनाउन लागिएको हो।’
दसैंअगाडि घर सिँगार्न रामप्रसाद त्यहाँ पुगेका थिए। ओली परिवारले जन्म घरलाई संग्रहालय बनाउने सोच १०÷१५ वर्ष अगाडिनै राखेको थियो। संग्रहालयमा हजुर आमा राममायाले प्रयोग गरेका केही सामग्री राखिनेछ। ‘हजुरआमाको फोटो संग्रहालयमा राख्छौं। अनि उहाँले चलाउनु भएको कसौडी, लोटा, बटुकालगायत सामग्री छन्, ती सबै राख्छौं,’ रामप्रसादले भने। संग्रहालय बनाउन सुरु देखि नै ओली परिवारले लगानी गर्दै आएको छ। संग्रहालय बनाउन सरकारी रकम प्रयोग नगरिएको रामप्रसादले जनाए।